HERE Radios mu 737 multi pak ye Prepar3dv4
mubvunzo HERE Radios mu 737 multi pak ye Prepar3dv4
1 gore 7 ago - 1 gore 7 ago #733 by spilok
Mu 737 pak yekugadzirira3dv4, zvinhu zvose zvinoshanda zvakanaka kunze kwekunyanya kuvhara redhiyo. Kungoita ruvara rukuru dema. Chero nzira ipi yekuwana mafirimu kuti aratidze?
Ps. Izvi zvinoitikawo neBoing 717 pak
Last edit: 1 gore 7 mwedzi yapfuura spilok.
1 gore 7 ago #734 by Dariussssss
Ungakwanisa here kutumira iyi muP3D Forum pano?
Uyu ndeye FSX uye FSX Steam.
1 gore 7 ago #736 by rikoooo
Ndakatamisa hurukuro yacho muhurukuro yakarurama.
Kana iyo redhiyo yemahara isingashandisi iwe unogona kuwana ruzivo rwayo kubva pane zvigadzidzo zve menu.
1 gore 7 ago #738 by spilok
Aiwa ... haugoni kuwana radhiyo ipapo. Kunyange zvakadaro inouya yakasviba.
Ndakaita zvishoma zvitsvakurudzo, uye sezvo izvi zviri Boeings kubva kuFSX uye zvakashandurwa kuP3d, zvinoratidzika kuti ini neimwe nzira ndakanganisa kubvisa GAUGE kana chimwe chinhu chemairasi muBoesings. Inogona kuva CAB file, hazvizivi.
Tariro, mumwe munhu anokwanisa kundibatsira nekudzorera ichi chiyero. Ndinonyatsonakidzwa nemafuta eBoeing paRickoooo uye ndinoda chaizvo kuvashandisa mu Prepar3dv4.
1 gore 7 ago - 1 gore 7 ago #739 by rikoooo
Zvadaro, iyi shandiswa ndeyewe: Mazano eGauges Regain Tool http://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/73/256
Rega ndizive kana zvichibatsira
1 gore 7 ago #740 by spilok
Ndatenda. Ndakaedza izvozvo kubva muraibhurari yaAVSIM zvakare. Ini ndakakoshesa chibvumirano chako ndokuchiedza zvakare, asi HERE LUCK. Chiri chikafu chikuru chine mutsvuku pasina maharai pane chero yaimbova FSX Boeing.
Ndinoshamisika kana kududza zita re Prepar uye nekuita kuti rivakwezve ringaita chero chii? Ndinofunga kuti zvakachengeteka kuita sezvandaiita muFSX?
1 gore 6 ago #767 by spilok
Zvose zvakanaka, zvino. Dzokorora zvakare yakanatsa zvinhu zvose.